Guddoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta gaaray Baydhabo – Gool FM
Guddoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta gaaray Baydhabo
(Muqdisho) 16 Maarso 2019. Guddoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Sodaalkan ayaa qeyb ka ah dadaallada aan kala joogsi lahayn ee socda kuwaasoo uu xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ku doonayo in lagu horumariyo ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada.
Safarka uu maanta Magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ku tagay guddoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ahna ku simaha guddoomiyaha Cali Shiine ayaa waxaa ku wehliyey Guddoomiye ku xigeenka horumarinka kubadda cagta Gobollada ahna xubin ka mid ah xiriirka Abuukar Islow Xasan.
Wafdigan ayaa maanta ka ambaxay Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana ay si nabad qab ah ku gaareen magaalada Baydhabo oo uu safarkoodu ku wajhnaa.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo ay ka go’an tahay sarre u qaadista kubadda cagta guud ahaan dalka ayaa masuuliyiin ka socda waxa ay maalmihii la soo dhaafay ku sugnaayeen maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Gabeed Soomaaliya.
Jamaal Xaashi oo ah xubin ka tirsan guddiga hormarinta gobollada xiriirka kubada cagta Soomaaliya iyo Kaaliyaha Xoghayaha Maxamed Deeq ayaa ku kala sugnaa Magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo.
Safarkan uu maanta magaalada Baydhabo ku gaaraay guddoomiye xigeenka xiriirka kubadda cagta Cali Shiine ayaa salka ku haya arrimaha horumarinta kubadda cagta gobollada, waxaana ay kormeerro ku samayn doonaan guud ahaan xarumaha kubadda cagta Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Cali Shiine oo qadka taleefkan kula hadlay GOOL FM isagoo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay kulamo la qaadan doonaan xiriirka kubadda cagta K/Galbeed, wasaaradda dhallinyada Koonfur galbeed, iyagoo kala hadli doona sidii loo hurmin lahaa kubadda cagta.
“Safarkeenna waxa uu yahay sahan aan ku samaynayno guud ahaan sida ay u shaqeeyaan xiriirka kubadda cagta Koonfur galbeed, sidoo kale waxaan u soo diyaarinaynaa xafiisyo.” ayuu yiri Cali Shiine oo la hadlayey GOOL FM.
“Mudada aan halkaan joogno waxaan soo diiwaan gelin doonnaa kooxaha halkan ka jira, maadaama aad ka war haysaan inaan qosheynayno inaan dhowaan qabanno Horyaalladda Maamul goboleedyada, socdaallada lagu bixinayo gobolladana arrintaas ayuu ku aaddan yahay” ayuu hadalkiisa raaciyey Guddoomiye Cali Shiine.
Socdaal ku simaha guddoomiyaha ahna guddoomiye xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Shiine iyo wafdiga kale ee xiriirka ay ku joogaan Magaalada Baydhabo ayaa qaadana muddo labo maalmood ah.